कोरोनाबाट मृत्यु भएकाकाे श’व जलाउन १७ हजार तिर्नुपर्ने ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कोरोनाबाट मृत्यु भएकाकाे श’व जलाउन १७ हजार तिर्नुपर्ने !
कोरोनाबाट मृत्यु भएकाकाे श’व जलाउन १७ हजार तिर्नुपर्ने !
जनकपुरधाम । कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । कयौँको रोजीरोटी खोसिएको छ । दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न धौधौ छ । सङ्क्रमितले अस्पतालमा भीड भएर उपचारका लागि शय्या (बेड) नपाएको अवस्था छ भने उपचारका नाममा आइसीयू र भेन्टिलेटरको सुविधा भएको अस्पताललाई दैनिक रु २५ हजारदेखि ५० हजार बढीसम्मको चर्को शुल्क तिर्न मानिस बाध्य छन् ।